महिला कर्मचारीलाई यौ न दु र्व्यवहार गर्दै कामबाट निकाल्ने ध म्कि दिएका सिईओ सञ्जयको घरमा नै पुग्यो प्रहरी ! – Sidha Kura
मुख्य पृष्ठ /समाचार/महिला कर्मचारीलाई यौ न दु र्व्यवहार गर्दै कामबाट निकाल्ने ध म्कि दिएका सिईओ सञ्जयको घरमा नै पुग्यो प्रहरी !
विराटनगर महानगरपालिका– १३ मा रहेको तयारी पोशाक उत्पादन गर्ने ट्राइकोट इण्डष्ट्रिज प्रालिका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सञ्जय चाण्डोकलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ । सिईओ चाण्डकले पटक–पटक आफूहरुमाथि दु र्व्य वहार गरेको भन्दै मजदुरहरू आन्दोलनमा उत्रिएपछि उनलाई प्रहरीले मंगलबार नियन्त्रणमा लिएका हो ।
सिईओ चाण्डोकले महिला मजदुरहरूलाई यौ न दु र्व्य वहार गर्ने गरेको साथै पुरूष श्रमिकहरूलाई कामबाट निकाल्ने ध’ म्कि दिन गरेको भन्दै उद्योगका करिब तीन सय श्रमिकहरूले आन्दोलन गरेका थिए । नियन्त्रणमा लिएर सिईओलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा ल्याएको मोरङ प्रहरी प्रमुख एसपी जनार्दन जिसीले जानकारी दिए ।
सिईओ भारतीय नागरिक हुन् । उनले महिला कामदारहरुलाई राति फोन गर्ने, विभिन्न प्रश्नहरु गर्ने, काममा चित्त नबुझेको भन्दै दबाब दिने जस्ता गतिविधि गर्ने गरेको आरोप मजुदुरहरुले लगाएका छन् । विराटनगर-१३ स्थित तयारी पोशाक उत्पादक कम्पनी ट्राइकोट इन्डस्ट्रिज प्रालिका सिइओ सञ्जय चाण्डोकलाई प्रहरीले मंगलबार पक्राउ गरेको हो।
श्रमिक महिला तथा पुरुषहरू भेला भएर चाण्डोकवि रू द्ध आन्दोलन गरेपछि प्रहरीले उनलाई नियन्त्रणमा लिएको मोरङका प्रहरी उपरीक्षक जनार्दन जिसीले बताए। उनका अनुसार एक महिलाले यौ’ न दु र्व्यहा रको उजुरी दिन लागेकी छिन्। ‘अन्य महिला श्रमिक पनि दु’ र्व्य वहारमा परेको गुनासो छ,’ जिसीले भने, ‘हामी अनुसन्धान गरिरहेका छौं।’
उद्योगमा कार्यरत् श्रमिक महिलाहरूलाई पटक-पटक दु र्व्य हार गरेपछि बाध्य भएर आन्दोलन गर्नुपरेको स्थानीय धिरज विष्टले बताए। मंगलबार दिउँसो उद्योगमा भेला भएका महिलाहरूले चाण्डोकलाई कु’टपि ट ग र्न खोजेका थिए।